Warshadda e-gaari, Soo-saareyaasha - Shiinaha Soo-saareyaasha elektaroonigga ah
Mootooyinka Harley ee mootooyinka loo yaqaan '60co 12ah 60v 20ah lithium ion' oo loo habeeyay ama lagu beddelay
Waxaan bixinaa qiimaha warshaddii loogu talagalay ee mootada magaaladacoco mootada Harley mooto 60v 12ah 60v 20ah lithium ion batari loo habeeyay ama lagu beddelay. Warshadeena waxay ku jirtay duurkaan illaa 6 sano waxayna leeyihiin khibrado hodan ah xagga naqshadeynta iyo sameynta xirmada baatiyada lithium, Batari E Bike Battery, Kaydinta qoraxda batari, mootada mootada iyo wixii la mid ah.
Warshadeenna waxaan ku haysannaa qalab dhameystiran oo wax soo saar ah oo qiimahoodu ka badan yahay $ 3000000 oo ay ku jiraan qalabka tijaabada unugyada batroolka wareega, qalabka alxanka otomaatiga ah, qalabka tijaabada heerkulka sare, qalabka tijaabada heerkulka hooseeya, qalabka tijaabada dhibcaha, qalabka tijaabada gariirka, wareega wareega baateeriga qalabka tijaabinta nolosha, muunadda iwm Macaamiisha daboolaya inta badan Yurub, Aasiya iyo Ameerika.Waxaan rajeyneynaa inaan noqonno lamaanahaaga muddada-dheer ee Shiinaha.
Batariga qiimaha ebike batari 36v 4.4ah / 10ah / 20ah batari baaskiil koronto oo loogu talagalay 1000w gaari dheelitir hoverboard baaskiil koronto
Waxaan bixinaa qiimaha warshad batari ebike batari 36v 4.4ah / 10ah / 20ah batari baaskiil koronto oo loogu talagalay 1000w baaskiil skateboard hoverboard dheelitirka baabuurta.Waxaan ku siin karnaa xal hal-talaabo ah iyo alaabooyin taxane ah oo dhan laga soo qaado baytariyada ilaa qaybaha batteriga sida macaamiil ahaan looga baahan yahay. Suuqa Aasiya iyo Ameerika.Waxaan filaynaa inuu noqdo lammaanahaaga muddada dheer Shiinaha.
Baakad Batroolka Lifepo4 24V 20AH Lithium ion RV / Camper / curyaamiinta korantada
Waxaan bixinaa qiimaha warshad Lifepo4 24V 20AH Lithium ion Battery Pack ee RV / Camper / Gawaarida curyaamiinta korontada.Waxaa naloo dhisay xiriir ganacsi oo muddo dheer ah oo lala yeesho shirkadaha caanka ah ee IC iyo unugyada batteriga, sida San-yo, Panasonic, Samsung, LG, Sony iwm iyo inta badan alaabadayadu waxay heleen CE, RoHs, UN38.3, shahaadooyinka MSDS. Macaamiisha daboola inta badan Yurub, Aasiya iyo Ameerika.Waxaan rajeynaynaa inay noqdaan lammaanahaaga muddada dheer Shiinaha.
jumlo lithium ion batrool xirmada 60v 16S 48v 13s 36v 10s 15Ah / 20Ah / 30Ah loogu talagalay E-sctooter
Waxaan ku siineynaa qiimaha warshad jumlada lithium ion baakidh 60v 16S 48v 13s 36v 10s 15Ah / 20Ah / 30Ah oo loogu talagalay E-sctooter.Waxaan la dhisnay xiriir ganacsi muddo dheer ah oo lala yeesho shirkadaha caanka ah ee IC iyo unugyada batteriga, sida San- yo, Panasonic, Samsung, LG, Sony iwm iyo wax soo saarkeenna badankood waxay heleen CE, RoHs, UN38.3, shahaadooyinka MSDS. Macaamiisha daboola inta badan Yurub, Aasiya iyo Ameerika.Waxaan rajeynaynaa inay noqdaan lammaanahaaga muddada dheer Shiinaha. .
Batiriiga lithium ion batari 488 20Ah ee Korantada Bike / mootada E-skateboard iyo qiimaha warshadaha
Waxaan ku siineynaa qiimaha wershadaha wRechargeable lithium ion batari 48V 20Ah oo loogu talagalay Baaskiilka Korontada / E-scooter/E-skateboard.Waxaa naloo dhisay xiriir ganacsi oo muddo dheer ah oo lala yeesho shirkadaha caanka ah ee IC iyo unugyada batteriga, sida San-yo, Panasonic , Samsung, LG, Sony iwm iyo inta badan alaabadayadu waxay heleen CE, RoHs, UN38.3, shahaadooyinka MSDS. Macaamiisha daboola inta badan Yurub, Aasiya iyo Ameerika.Waxaan rajeyneynaa inaan noqonno lammaanahaaga muddada dheer Shiinaha.